Scelta - Italiano - Birmanês Traduçãoeexemplos
Você procurou por: scelta (Italiano - Birmanês)
Scelta del carattere dell'editor
စာသားတည်းဖြတ် အယ်ဒီတာအတွက် ဖောင့်ရွေး
Test dei tasti di scelta rapida
Ma tutti sono d'accordo sul loro diritto di scelta.
အချို့က ခေါင်းဆောင်းဆောင်းရခြင်းကို နှစ်ခြိုက်ပြီး အချို့က မနှစ်သက်ကြပေ။
L'ultima directory da cui è stata scelta un'immagine.
La posizione scelta per memorizzare l'immagine temporanea non dispone di sufficiente spazio libero
ပုံရိပ်ဖိုင်ကို သိမ်းရန်ရွေးသည့်နေရာမှာ နေရာမလုံလောက်ပါ
Stringendovialui, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma sceltaepreziosa davantiaDio
လူတို့ပယ်ထား၍ ဘုရားသခင်ရွေးချယ်တော်မူသော အသက်ကျောက်မြက်တည်းဟူသော ထိုသခင် ထံသို့သင်တို့သည်ရောက်၍၊
L'ultima directory da cui è stata scelta un'immagine per l'avatar.
Il governatore era solito, per ciascuna festa di Pasqua, rilasciare al popolo un prigioniero,aloro scelta
Si legge infatti nella Scrittura: una pietra angolare, scelta, preziosaechi crede in essa non resterà confuso
ထိုသို့နှင့်အညီကျမ်းစာလာသည်ကား၊ ရွေးချယ်သော တိုက်ထောင့်အမြစ်ကျောက်မြက်ကို ဇိအုန် တောင်ပေါ်မှာ ငါချိတ်ထား၏။ ထိုကျောက်ကို အမှီပြုသောသူသည် ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိနိုင်ရာဟု လာသတည်း။
Ma egli rispose: «Non spettaavoi conoscere i tempiei momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta
သခင်ဘုရားက၊ ခမည်းတော်၏ တန်ခိုးအားဖြင့်စီရင်တော်မူသောအချိန်ကာလကို သိရသောအခွင့် သည် သင်တို့၌မရှိ။
A lui rimarrà una tribùacausa di Davide mio servoea causa di Gerusalemme, città da me scelta fra tutte le tribù di Israele
ငါ့ကျွန်ဒါဝိဒ်အတွက် ဣသရေလခရိုင်များတို့တွင်၊ ငါရွေးကောက်သော ယေရုရှလင်မြို့အတွက် ရှောလမုန်သည် တခရိုင်ကို ယူရ၏။
တဖန်ယေရှဲသည် ရှိမာကို သွားစေသဖြင့်၊ ဤသူကိုလည်း ထာဝရဘုရားရွေးတော်မမူဟု ဆို၏။
La posizione scelta per memorizzare l'immagine temporanea non dispone di sufficiente spazio libero (%ld MiB necessari)
ယာယီပုံရိပ်ဖိုင်တွေသိမ်းဖို့ရွေးတဲ့နေရာကနေရာလွတ်မလုံလောက်ပါ(%ld MiB လိုအပ်နေသည်)
Egli lega alla vite il suo asinelloea scelta vite il figlio della sua asina, lava nel vino la vesteenel sangue dell'uva il manto
မိမိမြည်းကို စပျစ်နွယ်ပင်၌၎င်း၊ မြည်းကလေးကို အမြတ်ဆုံးသော စပျစ်နွှယ်ပင်၌၎င်း ချည်နှောင်၍၊ မိမိအဝတ်ပုဆိုးများကို စပျစ်သီးအသွေး တည်းဟူသော စပျစ်ရည်ဖြင့် လျှော်လိမ့်မည်။
La violenza ha trionfato, il velo obbligatorio è stato imposto, ma il desiderio delle donne per la libertà di scelta prevale al di là della repressione.
သို့သော်လည်း အမျိုးသမီးများ၏ လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်မှုကို ဆန္ဒရှိခြင်းက ဖိနှိပ်မှုကို ကျော်လွန်၍ ပျံ့နှံ့တည်ရှိနေသည်။
မာရိမူကား၊ ကောင်းသောအဘို့ကို ရွေးယူပြီ။ ထိုအဘို့ကို အဘယ်သူမျှ မနှုတ်မယူရာဟု မိန့်တော်မူ ၏။
Io ti avevo piantato come vigna scelta, tutta di vitigni genuini; ora, come mai ti sei mutata in tralci degeneri di vigna bastarda
အကောင်းဆုံးသော စပျစ်နွယ်ပင်အမျိုးစစ် ဖြစ်သော သင့်ကို ငါစိုက်ပျိုးသော်လည်း၊ သင်သည် ငါ့ရှေ့ မှာ အဘယ်မျှလောက် ဖောက်ပြန်၍၊ အမျိုးမစစ်သော စပျစ်နွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်တကား။
တဖန် ယေရှဲသည် အဘိနဒပ်ကို ခေါ်၍ ရှမွေလရှေ့မှာ သွားစေသဖြင့်၊ ရှမွေလက၊ ဤသူကိုလည်း ထာဝရဘုရား ရွေးတော်မမူဟုဆို၏။
Dice il Signore Dio: «Ecco io pongo una pietra in Sion, una pietra scelta, angolare, preziosa, saldamente fondata: chi crede non vacillerà
အရှင်ထာဝရဘုရားက၊ စုံစမ်းသော အမြစ် ကျောက်တည်းဟူသော၊ မလှုပ်နိုင်အောင် မြဲမြံသော တိုက်ထောင့်အမြစ်ကျောက်မြတ်ကို ဇိအုန်တောင်ပေါ်မှာ ငါချထား၏။ ထိုကျောက်ကို အမှီပြုသောသူသည် ပြေးရ သောအကြောင်းမရှိ။
kya ham chai peet ha (Hindi>Inglês)maksud them (Inglês>Malaio)القباحة (Árabe>Tagalo)maksud width (Inglês>Malaio)fname (Italiano>Inglês)drugsverslavingsproblematiek (Holandês>Francês)thêm biểu tượng vào sự kiện (Vietnamita>Inglês)skool loopbaan (Africâner>Inglês)plasmacytoma (Inglês>Italiano)he has risen (Inglês>Latim)berpusu pusu (Malaio>Chinês (simplificado))muling ibalik (Tagalo>Inglês)somatropiini (Finlandês>Alemão)nestabilios (Lituano>Inglês)quod irrumabo (Latim>Inglês)duplizierte (Alemão>Espanhol)nadulas at nagka bukol sa ulo (Tagalo>Inglês)goals (Inglês>Africâner)translate our sentences (Inglês>Alemão)10 sentences of cow in kannada language (Inglês>Kannada)timbalan setiausaha (Malaio>Inglês)arivu (Inglês>Tamil)autoinfligirse (Espanhol>Inglês)jellyfish sting (Inglês>Tagalo)dialek berbeza (Malaio>Chinês (simplificado))